Saameynta Uruurinta iyo Kobcinta Xogta B2B ee Suuqgeynta | Martech Zone
Saameynta Uruurinta iyo Kobcinta Xogta B2B ee Suuqgeynta
Axad, Sebtembar 13, 2015 Douglas Karr
Markii aan bilaabay safarkayga shirkadeed ee aan ku hirgelinayo horumarinta joogtada ah, mid raadinta ah oo la jaanqaadaysa hagaajinta geeddi-socod kasta waxay ahayd wax-qabad la'aan - iyo fursad ku xigta - gacan-ka-hadal. Tobaneeyo sano ka dib waxaanan arkaa inay tani xitaa run ka tahay hay'addeenna.
Mid ka mid ah tusaale ahaan waa marka macaamiisheennu ay ku soo wareegaan safyadooda. Marka go'aan-qaadaha isbedelo, badiyaa xiriirka xiriirka macaamilku wuxuu ku jiraa halis. Waxba kuma jabna sida aan u shaqeyneyno; waa xaqiiqo jirta. Qofka cusubi wuxuu leeyahay khibraddiisa, habsocodkiisa iyo - badanaa - koox ka kooban shirkado taageera oo ka caawiyey waqtiyadii hore oo ay u badan tahay inay mustaqbalka ka caawin doonaan.
Markuu isbeddelku ku yimaado hoggaaminta, miisaaniyadaha iyo fursadaha ayaa la socda. Tusaale kale - waxaan inta badan isku aragnaa inaan ka shaqeyno dhalinyarada tiknoolajiyada suuq geynta ee soo martay maalgelinta maalgashiga. Isbeddelku waa meel walba, in kastoo! Tan dhexdeeda faahfaahinta ka timid Salesforce, Waxay xusayaan in nus saac kasta 120 cinwaan ganacsi isbeddelaan, 75 lambarrada taleefannada la beddelo, 20 agaasime guud ayaa shaqooyinkooda ka tagaya iyo 30 ganacsi oo cusub ayaa la aasaasay. Helitaanka xogta sidan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah kobcinta ganacsigayga iyo sidoo kale taada.
Xogta Salesforce.com ayaa kaa caawin kara inaad kobciso xogtaada si aad u horumarin karto astaamo dhameystiran oo awood u siinaya shaqsiyeynta, kaa caawineysa inaad daahfurto fikradaha adigoo u maraya qeyb wanaagsan iyo kala hormarin iyo hagaajinta suuq geynta iyo iibinta isku hagaajinta farriinta iyo dammaanadda.
Suuqgeeyayaasha casriga ah waxay u baahan yihiin inay isku daraan hal-abuurka iyo awoodda sheeko-falanqaynta iyo istiraatiijiyado xog-wade ah. Xog ka wanaagsan ayaa u sahlaysa suuqleyda inay dhisaan ololeyaal bartilmaameed ah isla markaana u gudbiyaan waxyaabaha ku habboon rajada. Uruurinta iyo falanqaynta xogta hogaaminta, suuqleydu waxay awoodaan inay u gudbiyaan fikradaha macaamiisha oo dhameystiran kooxda iibkooda, iyagoo hubinaya in qof walba uu kujiro isla bogga abuuritaanka khibrad macaamiil shaqsiyeed. Kim Honjo, Iibka
Xogtu waxay siisaa fursad aan caadi ahayn ganacsiyada sida tayda oo kale ah. Salesforce waxay leedahay buug elektaroonig ah oo cusub, Sidee Kooxo-Xog-uruurintu u Wadaan Guul Ganacsi, ganacsiyada si ay u bartaan sida iibka, suuqgeynta, iyo kooxaha maamulka CRM ay u dhisi karaan urur guuleysta xog-uruurin, si ugu dambeyn loo kaxeeyo guusha ganacsiga.
Tags: b2bxogta xiriirka b2bxogta b2bxogta xiriirDatadhammaystirka xogtatayada xogtaxogta iibkaKordhinta Iibkaiibin
DivvyHQ: Volume Sare Qorshaynta Mawduuca iyo socodka shaqada
Xayeysiinta Muuqaalka Yaashi ee Gobolka Juqraafi